लगातार ११ दिनसम्म घट्यो बजार | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर लगातार ११ दिनसम्म घट्यो बजार
लगातार ११ दिनसम्म घट्यो बजार
मार्जिन कर्जा लिन पाउने खबरले पनि बढेन बजार
कात्तिक २१, काठमाडौं । मङ्गलवार लगातार घटेको नेप्से ११ दिनसम्ममा ८७ दशमलव ४७ अङ्कले घटेको छ । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६० प्रतिशत घटेको छ । कारोबार भएको आधा घण्टाको अवधीमा १ हजार ५ सय ३ दशमलव ११ विन्दुमा पुगेको नेप्से त्यसपछि निरन्तर ओरालो लाग्दै अन्त्यमा ८ दशलमव ९७ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय ८४ दशमलव ४५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको शेयर धितोमा राखेर लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कम्पनीहरुबाटै मार्जिन कर्जा लिन पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई मार्जिन कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरेपछि बजार बढ्न सक्ने आशा समेत लगानीकर्ताहरुले गरेका थिए । तर, यो सुविधा आउन समय लाग्ने भएपछि बजार घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मार्जिन कर्जाको सुविधा दिन सक्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको खुद सम्पत्ति रू. ५ करोड हुनुपर्ने छ । तर, सबै धितोपत्र दलाल व्यवसायीसँग रू.५ करोड सम्पति नहुन पनि सक्छ । तिनिहरुले यो सुविधा प्रदान गर्न केहि समय लाग्ने भएकाले पनि लगानीकर्ताहरुलाई यो सूचनाले प्रभाव नपारेको हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रकाशित पहिलो त्रैमासिक विवरण नाफामुलक नभएपछि र प्रतिशेयर आम्दानी घटेपछि नेप्से घटेको ब्रोकरहरुको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी हेरेर शेयरमा लगानी गर्छन् । पहिलो त्रैमासको विवरणमा नाफा घटेपनि बाँकी रहेको ३ त्रैमासको विवरणमा नाफा र प्रतिशेयर आम्दानी बढ्यो भने बजार फेरी माथि जान सक्ने ब्रोकर कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १७ दशमलव ७७ प्रतिशत घटेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ६० प्रतिशत घटेर रू. १७ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत घटेर ३ सय ११ दशमलव ८८ अङ्क पुगेको छ । कारोबार भएका १ सय ५९ कम्पनीमध्ये ४५ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ९४ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । सूर्योदय लघुवित्तको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत बढेको छ । साथै, काबेली विकास बैङ्क लिमिटेडको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा करीब ७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५९ कम्पनीको ५ हजार ७५ पटकको व्यापारमा ११ लाख २९ हजार २ सय ९ कित्ता शेयरको रू.४२ करोड ४४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा सबैभन्दा बढी शेयर कारोबार भएका १० कम्पनीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको प्रत्तिकित्ता रू. ६ सय ३१ मा रू. १ करोड ९४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर, एभरेष्ट बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क, नविल बैङ्क, प्रभु बैङ्कको संस्थापक शेयर र प्रभु बैङ्कको लिमिटेडको रू. ९३ लाखदेखि १ करोड सम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा व्यापार समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ । व्यापार समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २६ प्रतिशत घटेको छ । परिसूचक घट्नेमा बैङ्किङ, विकास बैङ्क, बीमा, माइक्रोफाइनान्स, होटल, जलविद्युत, वित्त, र ‘अन्य’ समूह रहेका छन् । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रल जोन अथवा २९ दशमलव ९० स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ४७ रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।